5 - Puntland Mirror Believable Media Website
Qaxootiga dumarka ah sharci ahaan ma shaqeysan karaan ama ma heli karaan amniga bulshada ee Indonesia. Dumarka ayaa sheegaya in codsiyadooda gargaarka ah ee UNHCR iyo hay’adaha gargaarka loo diiday. Waxay ka baxaan hal qol waxayna tagaan mid ku xiga halkaas oo ay ka tuugsadaan qaxootiyada kale cunto. [Sawirka: Aaron Bunch/AAP]
Madaxweynaha DFS oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee Sucuudi Caraabiya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Arbaco ah waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka Sucuudigu uu u soo magacaabay Soomaaliya. Safiir Maxamed Cabdiqani Al-khayat ayaa waxaa soo magacaabay boqorka Sucuudiga [...]
Shirkada CCEECC oo dayactir ku samayn doonta wadada isku xirta Garoowe iyo Boosaaso
Garoowe-(Puntland Mirror) Shirkada Shiinaha laga leeyahay ee CCECC ayaa dayactir ku samayn doonta wadada isku xirta Garoowe iyo Boosaaso. Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Khamiis ah xarunta madaxtooyada Garoowe kulan kula [...]
Beledweyne-(Puntland Mirror) Madaxweynihii xilka laga qaaday ee Hir-Shabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa naftiisa u caleemosaaray in uu yahay madaxweynaha cusub ee waxa uu ugu yeeray Hiiraan-land” xaflad lagu qabtay magaalada Beledweyne shalay oo Jimce ahayd. [...]